Imagga: API loogu talagalay Isdhexgalka Aqoonsiga Sawirka Waxaa Ku Shaqeynaya Sirdoonka Artifishalka | Martech Zone
Imagga: API loogu talagalay Isdhexgalka Aqoonsiga Sawirka Waxaa Ku Shaqeeya Sirdoonka Artifishalka
Khamiista, Febraayo 11, 2021 Khamiista, Febraayo 11, 2021 Douglas Karr
Imagga waa xal aqoonsi oo dhan-ah oo loogu talagalay horumariyeyaasha iyo ganacsiyada si loogu daro aqoonsiga muuqaalka barnaamijyadooda. API wuxuu bixiyaa qaabab fara badan, oo ay ku jiraan:
Qeybinta - Si otomaatig ah uqeex sawirkaaga. Awood awood leh oo loogu talagalay kala soocidda muuqaalka degdegga ah.
Color - U oggolow midabada inay macno u keenaan sawirrada alaabtaada. Awoodda API ee midab soosaarka.
Goobidda - Si otomaatig ah u soo saar sawir-yar yar oo qurux badan. API xoog leh oo ku saabsan wax-goynta waxyaabaha ka warqaba.
Tababbarka Custom - Ku tababaro sawirka Imagga AI si aad si fiican ugu abaabusho sawiradaada liiskaaga u gaarka ah.
Aqoonsiga wajiga - Furo aqoonsiga wajiga ee codsiyadaada. Awoodda API ee dhismaha wejiga aqoonsiga.
Luuqado badan - Xilligan waxaa jira 46 luqadood oo lagu taageerayo dufcadda Imagga, qaybteeda, iyo tagging APIs.
Ammaan Maaha Shaqada (NSFW) - Isdhaxgalka muuqaalka muuqaalka ee qaangaarka oo otomaatig ah oo loo tababaray heerka farsamada aqoonsiga muuqaalka farshaxanka.
Tagitaanka - Si otomatig ah ugu dheji sumadaha sawiradaada. API awood leh falanqaynta muuqaalka iyo daahfurka.
Muuqaal Muuqaal ah - Ku xooji helitaanka wax soo saarka dalabkaaga. API awood leh oo lagu dhisayo awoodaha raadinta muuqaalka.
Barxadku wuxuu awood u leeyahay in ka badan 180 codsiyo ganacsi oo ku baahsan 82 dal oo in ka badan 15,000 bilaabayaal ah, horumariyayaal, iyo arday ah
Dib u eeg Dukumiintiyada API Imagga
Sidee Aqoonsiga Sawirku u Caawin Karaa Ganacsiyada?
Waxaa jira tiro siyaabo ah oo ay ururadu u geyn karaan aqoonsi muuqaal si loo hagaajiyo waxtarka gudaha iyo in la horumariyo khibradaha macaamiisha dibadda. Waa kuwan qaar ka mid ah:
Si fudud abaabulo hantidaada dijitaalka ah oo ka dhig kuwo lagu raadin karo iyada oo loo marayo tagging otomaatig ah, kala soocid, iyo raadin. Haddii aad haysato daraasiin ama boqolaal isticmaaleyaal soo rogaya sawirro isla markaana ka dhigaya maareynta hantidaada dhijitaalka ah khalkhal, adeegsiga aaladda sida Imagga ayaa otomaatig ka dhigi kara howlahaaga isla markaana kaxeyn kara waxtarka gudaha ee ururkaaga.
Hagaajinta Shakhsi ahaaneed firfircoon iyada oo loo marayo calaamadeynta iyo soo saarista midabka. Qiyaas inaad soo bandhigto alaabooyinka ay sida ugu badan ula falgalaan halkii aad ku amri lahayd inay gacanta ku shaandheeyaan oo ay doortaan. Waad otomatayn kartaa kala-mudnaanta iyo soo-bandhigidda sawirrada si aad ugu habboonaato shakhsiyaadka la yaqaan ee dadka ku soo booqda.
Dhis codsi ama adeeg si otomaatig ah u siiya jawaab celin isticmaaleyaashaada iyada oo ku saleysan sawir ay soo dhigaan. Taasi waa sida awooda Imagga Xaraashka, codsi mobiil ah oo ilbiriqsiyo gudahood ku garan kara dhirta, ubaxyada, cacti, succulents, iyo boqoshaada.
Dhis calanka iswada habka loogu talagalay sawirada NSFW lagu soo geliyay isticmaaleyaasha barnaamijkaaga. Qaybaha waxaa ka mid ah sawirro qaawan, qaybo gaar ah oo jirka ah oo la muujiyay, ama xitaa ogaanshaha dharka.
Aqoonso qaybaha ama alaabada muuqaal ahaan jawi wax soo saar ama wax soo saar. Jaamacadda Qaranka ee Seoul ayaa injineerisay a QOSOL BADAN Qashin xalka aqoonsaday oo abaalmariyay ardayda sida saxda ah ugu tuuray agab sax ah qashinka dib u warshadaynta saxda ah.
Imagga sidoo kale waxay bixisaa xalka goobta haddii ururkaagu u baahan yahay xog tiro badan, waa inuu hubiyaa asturnaanta, ama u baahan yahay marin u hel iyo xog qorid iyadoo loo eegayo shuruudaha sharciyeynta.
Hel Fure API Bilaash ah
Tags: aisirdoonka macmalogaanshaha midabkaaqoonsi wajigakala saarista sawirkasawir guranogaanshaha sawirkaaqoonsiga sawirkaraadinta sawirkasawir ku dhejintabarashada mashiinkaluuqad badanamaan uma aha shaqadansfwraadinta muuqaalka